Home News Dil caawa ka dhacay Magaalada Muqdisho!!!
Sidda ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal Kooxo hubeysan ayaa Maanta Isgoyska Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho ku dilay ruux ka mid ahaa dadkii ku sugnaa Suuqa.
Waxaa uu dilku ka dhacay Bartamaha Wadada Isgoyska Suuqa Bakaaraha, waxaana la dilay nin dhalinyaro ah.
Koox Bastoolado wadatay ayaa toogtay Ruux dhalinyaro ah ka dibna waxaa la sheegay in ay baxsadeen.
Sidda ay inoo xaqiijiyeen dadkii goobta ku sugnaa ruuxa la dilay ayaa ka mid ahaa dadka ka shaqeysta Basteejadda Isgoyska Bakaaraha ee baabuurta rara.
Ciidamada Ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay, waxaana la sheegay in ay halkaasi ka bilaabeen howlgallo.
Magaalada Muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay, waxaa kusoo batay dilalka Qorsheysan.
Previous articleGaas: Daacish & Shabaab dad ayeey laayaan, meelaha qaarna dad kuma dilaan
Next articleAl-shabaab oo Soo Bandhigay Saraakiil ku Labisan dareeska Ciidamada Kuwii Ugu Dambeeyay(SAWIRO)
Ciidamo 200 Gaaraya oo la dul-dhay Xarunta Golaha shacabka Iyo Xildhibaan...